DHAGEYSO: Booliska Somaliland oo soo qabtay raggii dilay dad muhaajiriin Itoobiyaan ah & Taliye Fooxle oo ku… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Booliska Somaliland oo soo qabtay raggii dilay dad muhaajiriin Itoobiyaan ah...
Hargeysa (Halqaran.com) – Taliska ciidamada booliska Somalilaan ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen rag burcad ah oo la tuhunsanyahay in ay dileen laba ruux oo muhaajiriin ah laba kalena dhaawacay xilli ay ku safrayeen baabuur duleedka magaalada Hargeysa.
Taliye xigeenka ciidamada booliska sarreeyo guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in raggan ay soo qabqabteen ay ku eedeysan dil iyo dhaawac loo geystay dadka muhaajiriinta.
Qunsuliyadda dowladda Itoobiya ee Hargeysa ayaa xaqiijisay in dadka ku waxyeeloobay falkaasi ay yihii muwaadiniin u dhashay dalkeeda.
Taliyaha ayaa sheegay in ay haatan ku jiraan baaritaan kiiska raggan ay soo qabteen gadaalna ay kasoo saari doonaan naatijada baaritaanka.
Dalka Soomaaliya ayaa marin u ah sanad walba boqollaal Itoobiyaan ah oo u tahriiba dalalka gacanka carbeed iyo Yurub kuwaaso oo raadinaya nolol dhaanta midda dalalkooda.
Hoos ka dhageyso taliye xigeenka ciidamada booliska Somaliland: